Banyere Anyị - Henan SinoDiam International Co., Ltd.
Dị ka injinịa, mmepụta, na ahịa diamond ụlọ ọrụ, anyị na-anọchi anya onwe anyị dị ka a "Ngwọta na-eweta maka International Diamond ahịa".
N'ihe karịrị afọ 20 nke ahụmịhe jikọtara na diamond na ụlọ ọrụ mkpuchi mkpuchi, SionDiam nwere akụ na ụba na ihe ọmụma enweghị atụ. Anyị na-eji ahụmịhe a iji nye ụlọ ọrụ na ndị mmadụ n'otu n'otu ngwaahịa na ngwaahịa ọhụrụ ha nwere ike ịtụkwasị obi n'ezie.
Anyị na ndị ahịa na-arụkọ ọrụ ọnụ iji gosipụta ihe ndị ha chọrọ superabrasive nke diamond, na-eme ka ndị ahịa anyị nweta ngwaahịa ndị dabara adaba maka ngwa ha. Nke a, yana mmekọrịta anyị na ike mmepụta na njigide nke ogo, na-enye anyị ohere iji hụ na ndị ahịa anyị bara uru na-enweta ngwaahịa kachasị mma na ọnụahịa asọmpi.
Bɛyɛ mfe 1,335
SinoDiam bụ ọkachamara na R & D, mmepụta na ahịa nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke ntụ ntụ, micron diamond na ngwaahịa diamond. The ngwaahịa akara ekpuchi ihe karịrị 100 ụdị dị ka HPHT lab toro diamond, metal nkekọ hụrụ grit diamond, Metal nkekọ crystalline na-abụghị crystalline ntupu size diamond, resin nkekọ ntupu size diamond, n'ozuzu na ọkachamara micron diamond, CBN, dara mkpuchi, polycrystalline diamond compact (PDC), polycrystalline diamond (PCD), diamond polishing onyinye na tupu alloyed metal powders.
Ngwa gụnyere ọla diamond, diamond ịcha hụrụ agụba, diamond coring ibe n'ibe, diamond wiring, diamond egweri cup wiil, diamond polishing na ihe, nkume, Metal nkekọ, kwupụtara nkekọ, resin bonded na ụdị nile nke electroplating ngwaahịa, maka nhazi nkume, ike alloy, magnetik ihe, eke diamond, mkpuru. PDC ibe n'ibe maka mmanụ na Ngwuputa mkpọpu ala.
Na mgbakwunye, anyị na-ahụ na anyị ga-anọ n'ihu usoro ọrụ ụlọ ọrụ site na iji teknụzụ kachasị ọhụrụ. Obi sie gị ike na n'agbanyeghị ihe ịchọrọ, ịnwere ike ịdabere na anyị iji nye ndị kachasị mma, ebumnuche ịbụ onye isi nke ihe ịchọpụta diamond na-enye ndị na-elekọta ụwa.